Nepal " Journey-Assist - Ny tena mahaliana! Ny lakozia. Ny kolontsaina. Climate. Mampidi-doza.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Nepal
Any Nepal, ny mpizahatany no mahaliana indrindra ny tendrombohitra avo indrindra sy ny tsangambato fahatsiarovana taloha. Betsaka ny Hindu sy Buddhist no mifantoka amin'ity firenena ity.
I Nepal dia fantatra fa ivon'ny ara-panahy. Tonga eto ny mpivahiny ara-pivavahana mba hisaintsaina sy hahamazava. Ny vahiny hafa dia mahita ny tendrombohitra tsara tarehy, ny tempoly mahafinaritra ary ny pagoda taloha. Ny mavitrika indrindra dia tonga eto amin'ny fitsangatsanganana an-tany sy ny fika ary ny fitsangantsanganana lehibe.
Ao amin'ny faritanin'ity firenena kely ity, izay misy fasika any India sy Chine dia misy tampoka valo avo indrindra eto an-tany, anisan'izany ny Everest. Tany amin'ny faritanin'i Nepal maoderina dia teraka i Buddha Gautama.
Firenena mahafinaritra i Nepal ho an'ireo izay tia fanatanjahan-tena tafahoatra. Misy karazany maro ny fientanam-po eto. Ireo mpankafy hetsika any ivelany dia tsy ho leo eto. Ny endrika mahafinaritra dia manampy amin'ny fiheverana tsara ny toerana mahaliana toy izany. Misy hetsika isan-karazany any ivelany any Nepal, manomboka amin'ny dia an-tongotra ka hatrany amin'ny bungee jumping.
Ny renirano an-tendrombohitra any Nepal dia tena mikitoantoana sy lalina. Ny fiaviany dia any Himalaya. Ny karazana rafting isan-karazany dia azo atao amin'ireo renirano ireo, voalohany - ny rafting. Azo atao ihany koa ny manao rafting amin'ny sambo catamaran, kayak ary asa tanana mitsingevana any ivelany. Azonao atao izany amin'ny ampahany amin'ny dia iray andro, ary toy ny fitsangatsanganana mandritra ny andro maromaro amin'ny renirano lehibe. Fohy ireo fizarana mivezivezy amin'izy ireo, saingy marobe.
Any Nepal, ny toetr'andro monsoon no manjaka. Amin'ity tranga ity, misy fisarahana fisaka amin'ny fehin-kibo avo. Miatrika fizarana fepetra, fehezin'ny climatic enina no mifampizara avy any atsimo ka hatrany avaratra:
Ny faritra tropikaly atsimo dia misy 1 200 m. Ahitana an'i Terai (anisan'izany i Sivalik sy Chitwan). Ny isotherm tamin'ny Jolay dia +28, ny isotherm tamin'ny Janoary dia +16. Amin'ny fahavaratra dia misy ny tondradrano. Mangatsiaka be ny ririnina.
Ny faritra subtropika dia misy haavo 1 - 200 1 m. Misy tanàna roa lehibe indrindra ao amin'ny firenena - Kathmandu (renivohitra) sy Pokhara. Isotherm amin'ny ririnina +900, isotherm amin'ny fahavaratra +17. Ny fotoana mety hitsidihana an'ity faritra ity dia ny volana Oktobra ka hatramin'ny Mey.
Ny faritra antonony dia eo amin'ny haavo 1 900 - 2 m.
Ny faritra mangatsiaka somary mangatsiaka dia miorina amin'ny haavo 3 - 000 m. Amin'ity faritra ity dia misy toerana kely nefa tena malaza eo amin'ireo mpizahatany, ny tanànan'i Namche Bazar. Mangatsiaka ny toetrandro eto. Orana ny fahavaratra ary mangatsiaka sy maina ny ririnina.
Ny faritry ny ahitra alpine dia misy haavo 4 - 000 m. Eto, manomboka amin'ny 5 m, dia misy lanezy mandrakizay.
Ny faritra misy ranomandry dia mitoetra amin'ny haavo 5 200 m mahery. Ny hatsiaka eto dia mangatsiaka be foana - na dia amin'ny fahavaratra aza dia matetika ny mari-pana milatsaka ambany -25, ary amin'ny ririnina dia mahatratra -40. Ny haavon'ny rivotra eto amin'ity faritra ity dia ambany, rivo-mahery izay mitsoka tsy tapaka.
Ny vola Nepaley dia Rupee Nepalese. Amin'ny fomba ofisialy dia mizara 1 ny rupee 100, fa raha ny tena izy dia tsy ampiasaina intsony ny pice. Mivezivezy ankehitriny dia misy faktiora misy antokom-pinoana 5, 10, 20, 50, 100, 500 ary 1 rupees.
Any Kathmandu sy Pokhara, ankoatry ny rupes any Nepalese, ekena amerikana sy rupe indiana dia ekena koa ny fandraisana an-tsitrapo any amin'ny hotely maro, ny birao tapakila fiaramanidina ary ny masoivoho fitetezana.
Ny banky any Nepal miasa manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny alakamisy, mazàna amin'ny 9 ka hatramin'ny 14 ary ny zoma manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 12. Ny biraon'ny fifanakalozana ara-dalàna matetika dia misokatra matetika amin'ny 9 ka hatramin'ny 19. Ny sasany amin'izy ireo dia miasa fito andro isan-kerinandro.
Ho an'ny fividianana, tokony hanana volavolan-dalàna kely indonezianina kely ianao, satria ambany be ny vidin'ity firenena ity. Aretina mafy koa izany mba tsy hanaiky volavolan-dalàna be karama na voatsindrina na triatra (misy maro amin'izy ireo) rehefa mifanakalo na mividy ho fanovana, satria misy tombony avo lenta tsy eken'izy ireo na aiza na aiza.
Ny fifanakalozana fifanakalozana any Nepal dia anolahana azy hatao amin'ny fifanakalozana ara-panjakana sy amin'ny banky. Any amin'ny seranam-piaramanidina, miharatsy hatrany ny fandehanana. Mba hifanakalozana amin'ireo rupiziana Nepaley, tokony hiaraka aminao dolara amerikana (vola hafa eto na tsy miova, na miova amin'ny vidiny ratsy kokoa). Amin'ity tranga ity dia tsara ny manome tahiry ireo volavolan-dalàna dolara miaraka amin'ny anaram-boninahitra eo amin'ny 100 sy 50, satria matetika izy ireo dia miova amin'ny vidim-bidy tsara kokoa noho ny volavolan-bolan'ny amerikanina kely kokoa.
Ao Kathmandu sy Pokhara, dia ampahany kely amin'ny fivarotana, hotely ary trano fisakafoanana no azonao aloa amin'ny alàlan'ny carte de crédit. Mandritra izany fotoana izany, ny vaomiera misy 4% ny vidin'ny fandoavam-bola dia matetika raisina.
Ny serasera finday eto amin'ity firenena ity dia mandroso tsara. 3G tratra na dia amin'ireo faritra be tendrombohitra aza. Na dia any amin'ny toerana sasany amin'ny havoana aza dia mbola misy faritra "maty" lehibe. Tsy misy olana amin'ny fifandraisana finday any amin'ny firenena sisa. Na izany aza, miadana ny Wi-Fi eto. Afaka mividy karatra SIM ianao amin'ny seranam-piaramanidina. Betsaka koa ireo teboka fivarotana karatra SIM any an-tanàna. Fa tokony hanana sary ho an'ny antontan-taratasy ianao. Takiana ny hividianana karatra SIM. Ireo mpandraharaha finday roa lehibe any Nepal dia i Nepal Telecom sy NCell.
Any Nepal dia misy fitaterana an'habakabaka (fiaramanidina kely izay manidina ao anatin'ny firenena), lalamby, ary fiara fitaterana (firaisana sy firaisan-kina). Ankoatra ny fiara fitateram-bahoaka, ao amin'ireo tanàna dia misy koa ny trolley, taxis, rickshaws ary rickshaws.
Betsaka ny seranam-piaramanidina 46 any Nepal. Saingy mandritra ny orana, ny ankamaroany dia mijanona tsy miasa, ka tsy misy sidina an-trano.
Ao Nepal, iray ihany ny fizarana amin'ny lalamby izay mampitohy ny tanànan'ny Nepal ao Janakpur sy ny vohitra Indiana Jayanagar. Ny halavirana eo amin'izy ireo dia 59 km. Na izany aza, ny olom-pirenen'i Nepal sy India ihany no mahazo mamakivaky ny sisintanin'i Nepal-India amin'ny lamasinina. Tsy mahazo manao an'io ny vahiny.
Ny fiara fitateram-bahoaka no tena karazan'olona fitaterana olona eto amin'ity firenena ity. Ny tapakilan'ny fiara fitateram-bahoaka dia tokony hovidina mialoha, satria ny isan'ny seza ao amin'ny kabinetra dia matetika matetika tsy mihoatra ny isan'ny isan'ny handeha. Mandritra izany fotoana izany, matetika ianao dia afaka mividy tapakila mivantana avy amin'ny mpamily. Mandany vola be izany raha eo amin'ny biraon'ny tapakila ataon'ny gara.
Betsaka ny serivisy taxi sy ny mpamily taxi ao amin'ny tanàn-dehibe Nepaley. Ny sarany mahazatra dia 10 ropia ho an'ny fipetrahana ary 2 rupees isaky ny metatra 200. Manomboka amin'ny 21 alina dia miakatra 1,5 heny ireo saran-dalana ireo
Nandeha fiara fitateram-bahoaka na trolleybus any Nepal mandalo 6 rupee. Ny fandoavam-bola dia alainan'ny mpitantana ao amin'ny kabinetra. Ny fiara fitaterana tanàna eto amin'ity firenena ity matetika dia tsy manaraka lalana ary tsy manana fandaharam-potoana voafaritra.
Ny lovia Nepaley malaza indrindra dia ny dal. Ity dia vary nandrahoina miaraka amin'ny voanio sy curry legioma, matetika koa miaraka amin'ny soja vaovao na pickled, izay mety ho matsiro. Ny sakafo mahazatra hafa (ankoatry ny vary) dia ovy sy varimbazaha. Nampiasa hena kely ny Nepaley. Ny hena fahita indrindra dia ny buffalo, osy, akoho, zanak'ondry ary ny yak. Tsy ampiasaina ny hen'omby satria masina any Nepal, ary koa any India. Amin'ny Pajanal rehetra (antsoina hoe kafe any Nepal), dia manolotra "mamo" izy ireo - lovia iray toy ny dumplings mahandro miaraka amin'ny amponga sy zava-manitra. Ny sakafo hariva ho an'ny efatra, izay ahitana mamô sy salady betsaka miaraka amin'ny tavoahangy janja kely (labiera Nepaley izay matetika atao ao an-trano), dia $ 15 monja no vidiny.
Roxy no zava-pisotro misy alikaola nasionaly. Ity dia vodka vary, ny heriny dia mety ho tena hafa - 15 ka hatramin'ny 60%. Na izany aza, ny zava-pisotro ankafizin'ny ankamaroan'ny Nepaley dia ny dite. Ny safidy mahazatra indrindra ampiasana azy dia tsy misy additives na amin'ny ronono sy / na crème. Ny dite misy menaka dia malaza any amin'ny faritra be tendrombohitra, saingy safidy "ho an'ny mpankafy lehibe" io.
Mandritra ny fijanonanao any Nepal dia ho azonao antoka tsara ny mampiasa safidin'ny hotely ary aza avela anaovana fihenam-bidy ao amin'ny efitranonao. Saingy, tsy dia fahita firy ny heloka bevava eto amin'ity firenena ity. Raha toa ny vahiny dia nifandona tamin'ny Nepaley, ny antony mahatonga izany, amin'ny maha-fitsipika azy, dia tsy fitandremana fomban'ny fitondran-tena eo an-toerana (na amin'ny ankapobeny) ankapobeny.
Eto amin'ity firenena ity dia tokony hanao akanjo mihidy ianao. Ny soroka matevina, ny tongotra ary ny lamosina dia kivy ato. Fanehoam-pitiavana eo imasom-bahoaka koa dia voaheloka ihany koa.